Ma is aqoonsan kartaa? Waxaad xaq u leedahay badbaado iyo taageero
Galmo aad wax ku beddelaneysid waxay la mid tahay sida adiga oo falal galmo ah sameynaya oo beddel ahaan wax u qaadanaya. Galmo waxay tusaale ahaan noqon kartaa
- in aad kaamiro intarneet iskula muujisid
- in aad daawatid marka uu qof siigeysanayo
- in aad cid horteed ku siigeysatid
- in aad cid la sameysid galmo ama falal galmo la xiriira.
Waxa aad qaadaneysid waxay tusaale ahaan noqon karaan lacag, meel aad seexatid, in gaari laguugu qaado, taleefan gacanta ah, dhar, sigaar, khamri ama daroogo.
Waxaa jira sababo fara badan oo uu qofku galmo wax ku dhaafsan karyo. Waxay noqon kartaa si uu qofku lacag u helo. Waxay noqon kartaa in qofka la khiyaameeyay ama la khasbay. Ama waxay noqon kartaa in loo arko wax xiiso badan, uuna xaqiijin bixiyo.
Swiidhan in galmo la iibiyo maaha wax mamnuuc ka ah. Laakiin waa mamnuuc in galmo la iibsado.
Taageero ma ugu baahantahay in aad xaaladdaada beddeshid? Ma u baahantahay cid aad la hadashid? Xaaladda qofka galmo wax dhaafsanaya wey u kala duwanaan kartaa. Qaar aad bey u fiicanyihiin, halka qaar ay xaaladdoodu aad u xuntahay oo ay dhibaatooyin badan qabaan. Iyadoo aan la eegeynin sida aad tihid waxaad markaa xaq u leedahay taageero kugu habboon, xaaladdaadana ku habboon.
Haddii xoog laguu adeegsanayo waxaad xaq u leedahay macluumaad, badbaado iyo taageero. Waxaad sidoo kale heli kartaa cid aad la hadashid. Haddii aad carruur leedihid taageero ayey xitaa carruurtu xaq u leeyihiin.
Mar walba waad la xiriiri kartaa ururrada soo socda si aad caawimaad u heshid
Mar walbawaad la xiriiri kartaa degmada aad ku dhex sugantihid. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa rugaha caafimaadka, rugaha qaabilaadda dhallinyarada ama booliiska.
Taleefan 114 14. Mar walba wac 112 haddii ay xaalad degdeg ahi jirto.
Taleefan taageero oo loogu tala galay adigaaga dhallinyarada ah. Xitaa khadka intarneetka qoraal ahaan iyo e-mail ahaan waad kula sheekeysan kartaa. Waxaad ahaan kartaa qof dahsoon.
Taageero khad intarneet qoraal kula sheekeysi ah oo dhallinyarada loogu tala galay halkaas oo aad ka hadli kartid sida aad tihid.
Taleefan taageero oo loogu tala galay adigaaga dhallinta yar, kuna cusub Swiidhan. Waxaad ahaan kartaa qof dahsoon. Kuwa ka jawaabaya waxay ku hadlaan luqado fara badan.
Khad taleefan oo loogu tala galay adigaaga la kulmay handadaad ama xoog adeegsi. Waxaad wici kartaa afar iyo labaatan saac. Waa wici kartaa xirtaa haddii aadan swiidhish ku hadleynin. Wadahadalku waa lacag la’aan, kamana soo baxayo warqadda qaansheegadka taleefanka. Waxaad ahaan kartaa qof dahsoon.
Meel hawli ka socoto oo ku siin karta caawimaad wax qabad ah, wadahadal iyo taageero. Adigaaga waxa qaatay si aad cid ula galmootid ama galmo ku dhaawacmay waxaad la xiriiri kartaa rugta qaabilaadda Mika. Waxaad ahaan kartaa qof dahsoon.
Meel hawli ka socoto oo ku siin karta caawimaad wax qabad ah, wadahadal iyo taageero. Adigaaga waxa qaatay si aad cid ula galmootid ama galmo ku dhaawacmay waxaad la xiriiri kartaa rugta qaabilaadda KST. Waxaad ahaan kartaa qof dahsoon.
NMT – qaab taageero oo qaran oo ka dhan ah dhilleysiga iyo ka ganacsiga baniaadamka 020-390 000
NMT waxay kaa caawin kartaa in aad heshid cid sax ah si aad caawimaad iyo taageero u heshid.
Plattformen civila Sverige mot människohandel - Golaha Swiidhanta rayidka ah ee ka dhanka ah ka ganacsiga baniaadamka
Urur ku caawin kara adigaagaa dhibaatada u nugul. Kala xiriir iyaga khadka e-mailka info@manniskohandel.se
Ciidamada badbaadinta 08-562 282 00
Kaniisad qabata hawlo bulsho oo aad u waaweyn. U tag Ciidamada badbaadada ee magaalada aad joogtid, ama wax ama e-mail u dir si aad caawimaad u heshid.